Mikobana sahady -
15/10/2018 admintriatra Tresaka 0
Miverina indray ireo zavatra niainana nandritra ny fotoan’ny Tetezamita. Tsy inona akory izany fa ny tsy fahazakana ilay antsoina hoe «Demokrasia». Izay olona maneho hevitra eo amin’ny tontolo politika sy ny raharaham-pirenena mantsy dia nosamborin’ny governemanta MAPAR tamin’izany, ary io mbola mitohy hatramin’ny andraony io. Mbola tsy miova ihay koa ilay fomba fanao, amin’ny fampiasana ireo herim-pamoretana entina hampanginana izay rehetra sahy maneho hevitra.
Nampisamborin’ity Governemanta ity indray mantsy ny ireo olona nikasa ny haneho hevitra tetsy Antaninarenina omaly. Marihina fa tanatina trano mihidy, ary tsy niankina no voatondro fa nanaovana ny fivorian’ny fikambanana Fanjakana Gasy. Sady tsy navela niditra tao amin’ilay toerana nokasaina nanaovana ilay fivoriana sy fanehoan-kevitra anefa izy ireo fa nosakanana, ary nosamborina avy hatrany ny sasany.
Maro amin’ny Malagasy araka izany no mihorohoro manoloana izao toe-javatra izaoh ireo efa zatra maneho hevitra momba ny raharaham-pirenena. Miverina miaina toa ny tamin’ny andron’ny Tetezamita indray mantsy ny raharaha ankehitriny. Izany hoe tsy hisy ho afa-bela fa tsy maintsy ho lasa any am-ponja avokoa izany ireo mpanao politika miseho manam-bava, ary efa zatra nampiaka-peo hatramin’ izay.
Izay ihany koa no mbola iainana eto amin’ity firenena ity mandritra ny fotoana iasan’io Governemanta MAPAR io, raha tarafina tamin’iny tranga omaly iny, raha ny hevitr’ireo mpanaraka ny raharaham-pirenena. Raha sanatria ka ho lany dia mbola hiaina anatin’ny tontolo feno tahotra ny vahoaka mandritra ny dimy taona ho avy. Azo antoka mantsy fa mbola ho tafaverina anatin’izay Governemanta hitsangana eo, ireto olon’ny MAPAR efa zatra mampiasa herim-pamoretana io.